अमेरिकाले भन्यो, अन्त र्राष्ट्रिय आ’तंक वादी समूहले नेपाललाई निशाना बनाउन सक्छ !! – Eshankharapur
स`ङ्क्रमण बढ्दै गएपछि लक`डाउनमा पुनः कडाइ !!
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए एकैदिन ३२ कोरोना संक्र`मित
शिक्षण अस्पतालमा कोरोनाका कारण ४५ दिनका शिशुको मृ’त्यु !
मुख्य पृष्ठ /International News/अमेरिकाले भन्यो, अन्त र्राष्ट्रिय आ’तंक वादी समूहले नेपाललाई निशाना बनाउन सक्छ !!
अमेरिकाले भन्यो, अन्त र्राष्ट्रिय आ’तंक वादी समूहले नेपाललाई निशाना बनाउन सक्छ !!
एजेन्सी । अमेरिकाले प्रत्यक वर्ष सार्वज`निक गर्ने बि`भिन्न देशमा हुनसक्ने आ तंकवादी गति विधि स`म्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई आ तंकवादी समूहहरुले ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर रहेको फाइदा अन्तराष्ट्रिय आ तंक वादीले उठाउन सक्ने उल्ल्ेख गरेको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले प्रत्यक वर्ष विभिन्न मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय आ तंकवादको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
जसमा नेपालको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा पनि उल्लेख छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आ तंकवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०१९ मा गैरनेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय आ तंकवादी संगठनहरुले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन वा आ क्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘भारतसँग खुला सीमा भएका कारण पनि नेपाललाई ट्रान्जित प्वाइन्ट बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा दावी गरिको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षाको कार्यविधि पर्याप्त नभएको हुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।
बलिउडमा अर्को झड्का, अभिनेता अक्षय कुमारका भाइ, ‘कहानी घर घरकी’ मुख्यका मुख्य कलाकार सचिन कुमारको निधन
आफ्नो कामदार फिर्ता लैजाउ भन्दै नेपाल सरकारलाइ दवाव दिए युएई, !!!
अब पार्टीको झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक जुट होऔं !!एक शेयर अवस्य गर्नुहोला !!